Waxaa qoray Maxamuud Maxamed oo Muqdisho jooga Maarso 23, 2012
Xoraynta ay ciidamada isbahaysiga ee Soomaalida iyo kuwa ka socda Itoobiya ay xoreeyeen magaalada muhiimka ah ee Xuddur waxay astaan u tahay waji-gabax iyo dib-u-dhac cusub oo dhinaca millitariga ah oo ku yimiday kooxda xiriirka la leh al-Qaacida ee al-Shabaab, sida ay sheegeen masuuliyiin ka tirsan dawladda iyo dadka siyaasadda gorfeeyaa. Ciidamada Itoobiya oo March 2-deedii heegan ahaan u taagan Baydhaba ka dib markii ay al-Shabaab ka xoreeyeen magaalada. Ciidamada isbahaysiga ayaa March 22-keedii u dhaqaaqay inay al-Shabaab ka xoreeyaan magaalada Xuddur. [Jenny Vaughan/AFP]
Wasiiro ka tirsan golaha xukuumadda Soomaaliya oo booqday Xuddur
Al-Shabaab oo dib u qabsatay Xuddur
Al-Shabaab oo Imaam waayeel ah ku gowracay Xuddur
Ciidamada Soomaalida oo ay taageerayaan askarta Itoobiya ayaa Khamiistii (March-22-keedii) la wareegay gacan ku haynta magaalada Xuddur, oo ah caasimadda gobolka Bakool ee koonfurta galbeed ee Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa magaaladaasi u isticmaalaysay saldhig tababbar.
“Guulahan millitari ee xiriirka ah ee ay ciidamada isbahaysigu ka gaareen gobollada Baay iyo Bakool ayaa jidka u xaadhaysa in al-Shabaab gobolka laga cayriyo loona jihaysto xoraynta magaalada muhiimka ah ee Kismaayo, taasi oo loo arko in ay tahay meel ay al-Shabaab xoog badan ku leedahay sidoo kalena tahay meesha uu dhaqaaluhu ka soo galo,” sida Cabdulqaadir Maxamed oo gorfeeya arimaha siyaasaddu uu ugu waramay Sabahi. “Waxay u muuqata in al-Shabaab jiho kasta lagaga hareeraysan yahay iyadoo haddii uu hawlgalka millitari xawliga uu hada ku socdaa sidiisa sii ahaado, aanay shaki ku jirin in awooda dhinaca millitari ee kooxdu ay kala dhantaalmi doonto iyadoo ugu dambaystana laga guulaysan doono,” ayuu yiri Maxamed. “Al-Shabaab hadda ka dib ma awoodo inay u babac dhigto ciidamada isbahaysiga kuwaasi oo hore usii dhaqaaqaya sidoo kalena gaaraya guulo millitari oo is-daba joog ah.”
Xildhibaan Ahmed Sheekh Maxamed “Laxos” oo ka qayb-qaadanayay hawlgalada millitari ee ka socday gobolka Bakool ayaa muujiyay rajada uu ka qabo in degmooyinka iyo magaalooyinka haray ee ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool si dhakhso ah loo xorayn doono. Xoraynta magaalada Xuddur laga xoreeyay mucaaradku waa guul wayn oo u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed oo mudo dheer la dhibaataysnaa arxan-daradii iyo caburistii ay ku hayeen xagjiriintu,” ayuu Maxamed u sheegay Sabahi isagoo ku sugnaa magaalada Xudur.
"Khamiistii, waxaan argagixisadii ka cayrinay magaalada Xuddur hawlgalkanina joogsan maayo,” ayuu yiri Maxamed. “Taa baddalkeeda waan sii wadi doonnaa dagaalka ilaa aan al-Shabaab iyo kooxaha kale ee argaggixisada ee nabadda u diidan dadka Soomaaliyeed aan ka xoraynayno dhammaan gobolada koonfureed.” Ciidamada AMISOM oo la gaynayo magaalooyinka la xoreeyay Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ugu hambalyeeyay ciidamada qalabka sida ee Soomaalida guulihii ay gaareen iyo xorayntii ay magaalada Xuddur ka xoreeyaan xoog ku hayshadii kooxihii xagjiriinta. Isagoo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho, wuxuu Cali ciidamada qalabka sida ee qaranka ugu baaqay inay labanlaabaan dadaalkooda ilaa goobaha haray laga xoreynayo gacanta al-Shabaab. Si loo sugo nabadgalyada iyo deganaanshaha goobaha la xoreeyay, wuxuu ra’iisal wasaaruhu sheegay in unug ka tirsan Ciidamada Nabad Ilaalinta Afrika (AMISOM) ee Soomaaliya ku sugan loo daadgurayn doono sida ugu dhakhsaha baddan si ay u buuxiyaan booska ciidamada Itoobiya ay banayn doonaan, kuwaasi oo u diyaar-garoobaya inay ka ciidamadooda la noqdaan dhammaanka bisha April. Cali wuxuu sheegay in Dawladda Federalka Ku-Meel-Gaarka ee Soomaalida (TFG) ay dejisay qorshe qaran oo ah sidii nabadda dib loogu soo celin lahaa loona taageeri lahaa dib-u-heshiisiinta iyo deganaansho ka dhasha gobolada cusub ee la xoreeyay. Qorshaha waxaa ka mid ah dhisidda maamulo degaan oo ay yeeshaan goobaha la xoreeyay si loo buuxiyo booska banaanaaday ka dib markii al-Shabaab la cayriyay. Qorshaha wuxuu sidoo kale u kuurgalayaa soo celinta nidaamkii kala dambaynta, hubka dhigista malleeshiyada, qaybinta gargaarrada bani’aadanimo iyo fidinta addeegyada aasaasiga ah ee muwaaddiniinta. Af-hayeenka baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa shir jaraa’id Baydhabo ku qabtay xorayntii magaalada Xuddur ka dib isagoo ku baaqay ballaarinta hawlgalada millitariga si loo burburiyo al-Shabaab goobaha harayna looga xoreeyo gacmaha kooxaha hubaysan ee xiriirka la leh al-Qaacida. Xuddur, waxay 420 kiiloomitir oo dhinaca koonfur-galbeed ah kaga toosan tahay magaalada Muqdisho, waana magaaladii saddexaad oo laga xoreeyo al-Shabaab iyadoo taageero laga helayo ciidamada Itoobiya, kuwaasi oo dalka Soomaliya soo galay November-tii la soo dhaafay. Guutada ciidamada ah ee Itoobiya waxay u yimaadeen inay taageeraan dawladda Soomaalida iyo si ay furaan aag saddexaad oo lagula dagalaamayo al-Shabaab, iyadoo ay hawlgallada la wadaan Ciidamada Difaaca ee Kenya oo hawlgal millitari ka wada koonfurta iyo ciidamada AMISOM oo iyaguna ku sugan magaalada caasimadda ah.
Cabdinuuw Mataan oo siyaasadda qorfeeya ayaa sheegay in hawlgalka millitari ee ka dhanka ah al-Shabaab uu galayo waji cusub ka dib markii ciidamada isbahaysigu ay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyinka muhiimka ah ee ku yaalla bartamaha, galbeedka iyo qaybaha koonfureed ee dalka. “Guulahan Horu-socod ee dhakhsaha ah ee ay gaareen ciidamada Soomaalida iyo kuwo Itoobiya , iyagoo awooday inay la wareegaan gacan ku haynta magaalooyinka waawayn ee ku yaala gobolada Hiiraan, Bakool, Baay iyo Gedo – iyadoon la tilmaamaynin guulaha ay AMISOM ka gaartay gacan ku haynta inta baddan deggaanada ku yaala Muqdisho -- uu ka dhigan yahay dhammaad degdega oo ku yimiday kooxdii al-Shabaab,” sida Mataan uu u sheegay Sabahi. Dadka arimaha ammaanka qorfeeya ayaa sheegay in al-Shabaab ay la tacaalaysay dib-u-dhacyo xiriir oo ka soo gaaray dhinaca millitari iyo culays kaga yimid ciidamada isbahaysiga.
Al-Shabaab waxay yaraysay muhiimada ay leedahay la wareegida ay ciidamada isbahaysigu ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Xudur. "Kooxaha jihaadayaasha ahi waxay magaalada Xudur uga baxeen xeelad millitari ahaan ee maaha in lanaga guulaysay,” sidaasi ayay kooxdu ku sheegtay warbixin ay soo saartay. “ Ujeedada jihaadayaashu ma ahayn in difaacaan magaalo gaar ah ee waxay ahayd in ciidamada cadawga loo oggolaado inay soo galaan magaalooyinka ka dibna si isdaba-joog ah weeraro iyo hub lagu garaaco loola beegsado ciidamada Itoobiya.” Ciidamada isbahaysigu waxay Jimcihii bandoo ku soo rogeen dadka ku nool magaalada Xudur, ka dib markii qaraxyo isdaba-joog ahaa ay Khamiistii dhaceen, sida ay ku soo warantay Shabakada Wararka Soomaaliyeed ee Shabeelle. Maxamed Ibrahim Mayow oo ah masuul ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in laba ka mid ah miinada dhulka lagu aaso ah oo ay al-Shabaab dhulka ku duugeen ka kor intii ayna ka bixin goobtaasi ay Khamiistii qarxeen. Qofna kuma dhaawacmin, wuxuu Mayow sidaasi ugu waramay Idaacad ay dawladdu maamusho ee ku taala magaalada Muqdisho.
“Markii qaraxu dhacay, dadka shacabka ahi waxay xireen dukaamadoodii waxayna iska joogeen guryahooda, taasi oo muujinaysa sida ay noola shaqaynayaan [si ay u hubiyaan ammaanka],” ayuu yiri Mayow. Ma jeclaysatay maqaalkan?
March 27, 2012 @ 10:41:39AM
waa in wadanka laga saaraa alshaab iyo wixii raacsan oo taageersan BA ma aha TA maaha waxay yihiin majiraa niin waayo nabadna marabaan heshiisna marabaan seelayeeli waa in wadan ka laga saaraa sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin madaxtoootadii baa maara looga la'yahay habeen walba way kutuuraa dhowr madaafiic marka hore waa in lasoo qab qabtaa madax dooda meelkasta ayjoogaan